शिशिर भण्डारी आमाको मुख हेर्ने दिन मनाए बृद्धाश्रममा , आसिर्बाद लिदै ( हेर्नुस भिडियो ) – ThikThak News
शिशिर भण्डारी आमाको मुख हेर्ने दिन मनाए बृद्धाश्रममा , आसिर्बाद लिदै ( हेर्नुस भिडियो )
May 4, 2019 May 4, 2019 - LeaveaComment
आज माता तिर्थ औसी अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। आजका दिनलाई मातृ औसी पनि भन्ने गरिन्छ। आजको दिन मा आमालाई मिठो मिठो परिकार बनाएर खुवाउने अनि लुगाफाटो र उपहार दिएर सम्मान सहित मनाउने गरिन्छ। आफ्नो जन्म दिने आमाको सम्मान मा वैशाख कृष्ण औँसीका दिन मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाउने गरिन्छ। आमाले सन्तान प्रति गरेको माया ममता स्वरुप श्रद्धा, भक्ति, सम्मान सहित आजको दिन आमाको मुख हेर्ने पर्ब मनाउदै शुभआ शीर्वाद थापेर मनाउने चलन छ। आफ्नो सन्तानका लागि कुनै पनि हद सम्म दुख र पिडा सहेर सन्तानलाई सुख दिने आमाको गुणगान गाउन सब्द काफी छैन। छोरा छोरी ले जति नै सेवा गरेपनि आमाले लगाएको मायाको ऋण तिर्न सम्भब पनि छैन।
शिशिर भण्डारीले आफ्नो आमा त यसै खुसि छिन , आफु बृद्ध आश्रमका सयौ आमालाई खुसि दिने कोसिस गर्ने भन्दै बृद्ध आश्रम पुगेका छन्। जसको भिडियो उनले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत सार्बजनिक गरेका छन्। समय समयमा सामाजिक काम गर्दै आएका शिशिर भण्डारीले जनमानस मा राम्रो नाम कमाएका छन्। यस पटक उनि बृद्ध आश्रम पुगेका हुन्। आजको दिन धेरै सन्तानले आफ्नो आमाको घर पुग्ने गरेका छन्। यसको प्रतिबिम्ब स्वरुप सिशिर्ले पनि बृद्ध आश्रमका हरेक आमालाई आफ्नो आमा को रुपमा मानेको उनको अभिव्यक्तिले देखाएको छ। यसैबिच शिशिर भण्डारी बृद्धाश्रममा आमा भेट्न पुगेका छन् । रबिभवन काठमाडौंको बृद्धाश्रममा उनले आमाको आशिर्वाद लिए ।
आमा र सन्तान बीच बिशेष महत्व राख्ने आजको पर्बले सम्बन्धमा प्रगाढ बनाउने काममा बिशेष भूमिका खेल्ने गरेको छ। आजको दिन सन्तानहरु मिठो मिठो खानेकुरा खुवाएर आसिर्बाद लिएर आमा संग भेट घाट गर्दा आमाहरुले पनि खुसीको अनुभूति गर्नेमा दुइमत छैन। आमाले जिबनमा लगाएको गुण तिर्ने एक कोसिसको रुपमा पनि आजको पर्ब लाइ लिने गरिएको भनाइ समेत रहेको छ।
यसैबिच शिशिर भण्डारी बृद्धाश्रममा आमा भेट्न पुगेका छन् । रबिभवन काठमाडौंको बृद्धाश्रममा उनले आमाको आशिर्वाद लिए ।हेर्नुस भिडियोमा
"पृथ्वी नारायण शाहको जस्तो प्रचण्डको निधारमा थुक्ने दिन नआओस्" - आङकाजी शेर्पा
चर्चित गायन रियालिटी शो ' भ्वाइस अफ नेपाल ' पहिलो एपिसोड ! हेर्नुस भिडियोमा
को को पुगे नेपाल आइडल फाइनलमा ? कस्को जित्ने सम्भावना ? ( भिडियो )
Previous Article संसारकै सबभन्दा महान् , स्नेहकी खानी आमा – आज आमाको मुख हेर्ने दिन
Next Article चलचित्र ‘दाल भात तरकारी’ को आक्रामक ब्यापार , तोड्ला त रेकर्ड ?